40453 Batman vs. The Penguin & Harley Quinn မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
Lego Star Wars 2022 ဆက်စပ်ပစ္စည်း packs များကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
02 / 12 / 2021 03 / 12 / 2021 ခရစ် Wharfe 73 Views စာ0မှတ်ချက် 40453 Batman အဆိုပါ Penguins & Harley Quinn vs., 40511 Minions ကွန်ဖူသင်တန်း, 40557 ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဟော့သ်, 40558 Clone Trooper Command Station, 75320 Snowtrooper စစ်တိုက် Pack ကို, 75321 Razor Crest Microfighter, 75322 Hoth AT-ST, Batman, Lego, Lego Batman, Lego Minions, Lego Star Wars, LEGO.com, Minions, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group
အဆိုပါ LEGO Group အလွန်မျှော်လင့်ထားသော LEGO နှစ်ခုကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ Star Wars ဆက်စပ်ပစ္စည်း အစုံလိုက် 40557 Defence of Hoth နှင့် 40558 Clone
LEGO ၏ကောလဟာလအကြောင်းအရာများ Star Wars ၂၀၂၂ minifigure အထုပ်ငယ်များ
05 / 10 / 2021 05 / 10 / 2021 ခရစ် Wharfe 409 Views စာ0မှတ်ချက် 40453 Batman အဆိုပါ Penguins & Harley Quinn vs., 40454 Spider-Man Venom နှင့်သံ Venom နှိုင်းယှဉ်, 40500 Wizarding ကမ္ဘာ့ဖလား Minifigure ဆက်စပ်ပစ္စည်းသတ်မှတ်မည်, Batman, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Instagram ကို, Lego, Lego Batman, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလများ, Lego Star Wars, Marvel, ကောလာဟလာ, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group
နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရကောလာဟလသတင်းများ LEGO ပေါ်ထွက်လာ Star Wars သူတို့၏အကြောင်းအရာများနှင့်မျှော်မှန်းထားသောဖြန့်ချိမည့်ရက်တို့အပါအ ၀ င်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအထုပ်များ
19 / 09 / 2021 19 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 236 Views စာ0မှတ်ချက် 40453 Batman အဆိုပါ Penguins & Harley Quinn vs., 76180 Batman Joker နှင့် Batmobile Chase, 76182 Batman သားလေး, 76188 Batman Classic တီဗီစီးရီး Batmobile, 76238 Batman သားလေး, 76238 Classic တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲ Batman သားလေး, ၇၆၂၃၉ Batmobile Tumbler Scarecrow Showdown, 76240 Batmobile Tumbler, ၇၇၈၄ The Batmobile Ultimate Collectors Edition, Batgirl, Batman, Batman Movie,, နှိုင်းယှဉ်မှု, Dc, Lego, Lego Batman, Lego DC က
Lego Star Wars နှင့် Marvel ၂၀၂၂ အတွက် minifigure အထုပ်များ
14 / 09 / 2021 14 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 343 Views စာ0မှတ်ချက် 40453 Batman အဆိုပါ Penguins & Harley Quinn vs., 40454 Spider-Man Venom နှင့်သံ Venom နှိုင်းယှဉ်, Batman, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Infinity Saga, Instagram ကို, Lego, Lego Batman, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလများ, Lego Star Wars, Marvel, ကောလာဟလာ, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group
ကောလာဟလများအရတော့ LEGO ဖြစ်သည် Star Wars နှင့် Marvel နှစ် ဦး စလုံးသည် ၂၀၂၂ တွင် minifigure accessory pack များကိုပထမဆုံးရရှိလိမ့်မည်
Lego တိုင်း Batman နှင့် DC သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှင့်နောက်နှစ်များတွင်အနားယူရန်သတ်မှတ်ထားသည်
17 / 08 / 2021 18 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 424 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၉၁၉ Batcave, 40386 Batman, 40428 အဆိုပါ Joker, 40453 Batman အဆိုပါ Penguins & Harley Quinn vs., 70922 အဆိုပါ Joker Manor, ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile, 76157 Cheetah vs. Wonder Woman, 76158 Batboat အဆိုပါ Penguins လိုက်စား, 76159 Joker ရဲ့ Trike Chase, 76160 မိုဘိုင်း Bat- အခြေစိုက်စခန်း, ၇၆၁၆၁ ၁၉၈၉ Batwing, 76188 Batman Classic တီဗီစီးရီး Batmobile, Batman, Dc, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Lego Marvel, Marvel, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, The Dark Knight ဟာ, အဆိုပါ Lego Batman Movie,
လက်ရှိ LEGO မှအစုံနှစ်ခု မှလွဲ၍ အားလုံး Batman နှင့် DC line-up သည် ၂၀၂၁ တွင်အနားယူရန်စီစဉ်ထားသည်
တရားဝင် DC အစုံနှင့် LEGO Suicide Squad ကိုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နည်း
04 / 08 / 2021 05 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 562 Views စာ0မှတ်ချက် 40453 Batman အဆိုပါ Penguins & Harley Quinn vs., 70907 Killer Croc အမြီး -Gator, 70917 အဆိုပါ Ultimate Batmobile, 70918 အဆိုပါ Bat-Dune Buggy, 76053 Batman Gotham City သံသရာ Chase, 76055 Batman Killer Croc ရဆေိုး Smash, 76159 Batman: Joker ရဲ့ Trike Chase, စျေးဝယ်, Batman, Batman Movie,, အုတ်ခဲ, ဗိုလ်ကြီး Boomerang, Dc, Deadshot, Harley Quinn, Katana, Lego, Lego DC က, ပိုလိုကာ - လူသား, အလယ်တန်းစျေးကွက်, မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေ Squad, အဆိုပါ Lego Batman Movie,, အဆိုပါသေကြောင်းကြံစည်မှု Squad
Suicide Squad ကိုသင့်ဒေသပေါ် မူတည်၍ ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့် streaming ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်ပြသနေပြီး LEGO ရှိသည်
LEGO သည် The Suicide Squad ကိုအွန်လိုင်းကြော်ငြာသစ်၌အားပေးသည်
30 / 07 / 2021 30 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 511 Views စာ0မှတ်ချက် 18 +, 40453 Batman အဆိုပါ Penguins & Harley Quinn vs., 76159 Joker ရဲ့ Trike Chase, လူကြီးများကိုကြိုဆိုပါတယ်, Batman, Dc, Harley Quinn, ဂျိမ်းဂွန်, Lego, Lego Batman, Lego DC က, လူကြီးများအတွက် Lego, LEGO.com, မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေ Squad, အဆိုပါ LEGO Group, အဆိုပါသေကြောင်းကြံစည်မှု Squad
အဆိုပါ LEGO Group James Gunn's The Suicide Squad ကိုယနေ့ပြဇာတ်ရုံ၌ဖြန့်ချိခဲ့သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
သန့်ရှင်းသောအစောပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်, Batman! ဒီမှာ LEGO 76188 Batman Classic တီဗီစီးရီး Batmobile
13 / 04 / 2021 14 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 1034 Views စာ0မှတ်ချက် 1966 Batman, 40453 Batman အဆိုပါ Penguins & Harley Quinn vs., 76052 Batman Classic တီဗီစီးရီး Batcave, 76188 Batman Classic တီဗီစီးရီး Batmobile, အာဒံအနောက်, Batman, Cesar Romero, Lego, Lego Batman, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego သုံးသပ်ချက်များ
76188 ၏ပထမဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ Batman Classic တီဗီစီးရီး Batmobile startအွန်လိုင်းဆင်းသက်ရန် ing, ထိုသို့ဤကြည့်ရှုသည်
အသစ်တစ်ခုကို Lego ဖြစ်ပါတယ် Batman 1966 ခုနှစ်တွင်လာမယ့် 2021 Batmobile?
18 / 03 / 2021 18 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 1598 Views စာ0မှတ်ချက် 1966 Batman, 40453 Batman အဆိုပါ Penguins & Harley Quinn vs., 76052 Batman Classic တီဗီစီးရီး Batcave, အာဒံအနောက်, Batman, Burt ရပ်ကွက်, Dc, DC ကသူရဲကောင်းများ, ဂျိုကာ, Lego, Lego Batman, ရော်ဘင်
ကောလာဟလများအရ ၁၉၆၆ Batmobile ဗားရှင်းသစ်သည် LEGO တွင်ပါဝင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည် Batman 2021 ခုနှစ်တွင်လိုင်း -Up ။